Ihe ịchọ mma Aluminom
Nchọpụta Metal Ihe
Mpempe akwụkwọ Laser
Mkpuchi, okpu na post
Hinge na akụrụngwa ndị ọzọ
Oghere oghere na Solid Boll
Olu akwa Pipe
Ngwongwo nhazi ígwè
Usoro mmezi ngere ígwè
site na nchịkwa na 21-03-20
N'ikwu okwu n'ozuzu, onye nrụpụta ahụ atụlela njirimara nke gburugburu ebe obibi n'oge usoro mmepụta nke ngere ígwè. Na nhọrọ nke ihe na mkpuchi, ha na-agbasi mbọ ike inweta nchara nchara, na-eyi nguzogide, nguzogide corrosion, na mgbochi mkpughe, yabụ ndị ọrụ na-enweghị ...
Ọdịiche dị n'etiti nsu ngere na ngere nchara zinc
Mgbidi ígwè bụ ihe ịchọ mma nke na -agbanwebeghị kemgbe ọtụtụ afọ n'ime ụlọ ahụ, ọ bụkwa ụdị ịma mma dị ala igosi ndị mmadụ. Usoro usoro nke ihe nchedo igwe nkedo: ịcha, ịkpụ akwa, ịgbado ọkụ na ịgbakọta, nchacha, eserese, nkwakọ ngwaahịa. Ogwe nchekwa nkedo nwere ọtụtụ ụdị, ...
Ụkpụrụ nhọpụta maka bracket cast brail bracket
A na-akpọkwa bracket cast bracket bracket, okporo ụzọ nchekwa, nkedo nchara na-agbado ihe nkwado, bracket bracket, bracket bracket, bracket bracket bracket, highway guardrail cast iron pipe frame, support rail pipe pipe support. Iji hụ na ...
akara ukwu anyị, ndị isi, ihe ọhụrụ, ngwaahịa
Ọdịiche dị n'etiti ngere ígwè na zin ...
Nhọrọ ọkọlọtọ maka akwa nkedo ígwè g ...
Okwu: 16KM SITE S203 WUFAN ROAD COUNTY SHIJIAZHUANG CHINA
Ihe ịchọ mma nke Iron Gates, Ogige Ogige, Handrail tube, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Akara stampụ, Nkume ịchọ mma,